musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Yekubuda Ndege Yakabviswa muKabul yakanyangarika kuenda kuIran
Afghanistan Kuputsa Nhau • Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Iran Kuputsa Nhau • nhau • chengetedzo • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Ukraine Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Nyika zhinji dziri muAfghanistan dzichiedza kubhururutsa vagari vadzo mukuchengeteka mushure mekunge varwi veTaliban vatora nyika.
Kabul Airport iri pasi pekutonga kweAmerica uye Ukraine yakatumirawo ndege kuti ibudise vagari vayo. Iyi ndege yakabiwa ndokuenda kuIran.
Ndege yeUkraine yakasvika kuAfghanistan neSvondo kuzobvisa maUkraine yakabvutwa neboka risingazivikanwe revanhu vakabhururutsa ndege yeUkraine kuIran,
Gurukota reUkraine rezvekunze rakaudza vezvenhau veUkraine kuti: “Svondo yadarika, ndege yedu yakapambwa nevamwe vanhu.
Ndege yakabiwa uye pachinzvimbo chekuendesa ndege kuUkraine, kuyedza kwedu kwekubuda nhatu kwakatevera hakuna kubudirira nekuti vanhu vekuUkraine vaisakwanisa kupinda munhandare.
Maererano Gurukota reUkraine Kunze kwenyika, vapambi vacho vaive nezvombo.
mwe kubvisa ndege akasimuka asina kana nyaya.
Nekudaro, mutevedzeri wegurukota haana kuzivisa chero chinhu nezve zvakaitika kune ndege kana kuti Ukraine yaizotsvaga kuidzosa.
Hapana ruzivo rwakaburitswa pamusoro pekuti vagari veUkraine vanogona kubviswa sei kubva kuKabul vari mungarava iyi "inenge yakabiwa" kana imwe ndege iyo Kyviv yaigona kutumira
Gurukota rakangosimbisa kuti mamishinari eUkraine anotungamirwa negurukota rezvekunze Dmitry Kuleba "anga achishanda munzira yekuyedza" vhiki rese.
NeSvondo, ndege yekutakura zvemauto nevanhu makumi masere nevatatu vaive muchikepe, kusanganisira makumi matatu nevatanhatu vekuUkraine, yakasvika ichibva kuAfghanistan muKyiv.
Hofisi yemutungamiriri wenyika yakazivisa kuti vechiuto gumi nevaviri vekuUkraine vakadzokera kumba, ukuwo vatori venhau vekunze uye vanhu veruzhinji vakakumbira rubatsiro vakaburitswa.
Ihofisi yakawedzerawo kuti vanhu vanosvika zana vekuUkraine vachiri kutarisira kubuda muAfghanistan.